Taxi-be tsy mety miasa “Manana ny safidiny izy ireo” hoy ny UCTS
Ny talata teo dia maro ireo tomponà fiara fitateram-bahoaka no nitaraina fa tsy handray ny asa izy ireo raha tsy tonga ny fanampiana ho an` ireo mpamiliny sy reseverany.
Omaly dia ampahany maro tamin` ireo fiara fitaterana eo amin` ny zotra G, izay mampitohy an`Ambatomirahavavy amin` ny renivohitra, no tsy niasa satria tsy mbola nahazo fanampiana nampanantenain` ny fanjakana ho azy ireo nandritra ny iray volana tsy niasana. Raha ho an` ireo fiara niasa kosa dia saran-dalana tokana 600 ariary ihany ary tsy misy saran-dalana. Etsy ankilany, nilaza ny vondron` ireo kaoperativa manodidina an`Antananarivo Renivohitra (UCTS) fa tsy hifanerena raha te hiasa ireo taxi be na tsia. Manana ny safidiny izy ireo. Raha miandry fanampiana izy ireo dia miandry ny ministera tompon'andraikitra izy ireo. Etsy andaniny kosa, milaza ny ministeran` ny fitaterana fa hisy tombana atao hijerena ny lesoka amin` ity fomba fiasa vaovao ity. Raha ny fanamarihana hatrany dia isaky ny mitatitra olona ireo fiara fitaterana no miatrika ny famendrahana fanafody atao amin`ny fiara amin` izy ireo.